Aha otutu nke Royals - Ntụrụndụ
#actagainstabuse Atụmatụ & Ndụmọdụ Mma Ezi Ntụziaka Kichin Na-Adịgide Adịgide Ahụike Ndị Nweta Dị Agba Anya Ejiji News
Aha otutu ọ bụla maka Ezinaụlọ, Site na Queen Elizabeth ruo Baby Archie
Naanị n'ihi na ha bụ ndị otu onye eze nke ezinụlọ eze, ọ pụtaghị na ha enweghị aha nkịtị maka ibe ha n'azụ ụzọ. Yup, dị ka ezinụlọ ọ bụla nkịtị, ndị eze Britain a nwere nicknames (ụfọdụ nwere okike karịa ndị ọzọ). Iji maa atụ, ị maara na Prince Philip kpọrọ Queen Elizabeth Kabbage? Anyị amachaghị nke ọma.
Guo maka aha otutu ndi eze, tinyere nwa Archie.
Njikọ : Iwu 7 Royal Ruchie Archie agaghị eso mgbe Prince Harry & Meghan Markle kwusịrị
1. Nwanyị Elizabeth
Aha otutu: Kabeeji, Gan-Gan, Gary
N'ime ndị eze niile nọ na ndepụta a, Queen Elizabeth nwere ọtụtụ aha njirimara (ma ọ naghị eju anyị anya). Anyị ga-ebido site na moniker ịhụnanya nke di ya bụ Prince Philip nyere ya - onye amara gburugburu BP dị ka P.P. Dika o siri pụta, ọ kpọrọ ya Onyeisi Kabeeji. Anyị bu ụzọ mụta ihe ụtọ a n'oge 2006 nkiri Nwanyị Queen, tupu ya emechaa gosi na ndị nọ nso fam.
A na-akpọkwa ya Nwanyị Gan-Gan nwa nwa nwa ya bụ Prince George. N'ajụjụ ọnụ ITV site na 2016, Kate Middleton kpughere ọkpara ya nke malitere iji aha otutu mgbe ọ dị afọ abụọ.
Dika Gary na-aga, o yiri ka William o siri ike isonye ikwu nne nne ma ọ bụ nne nne mgbe ọ dị obere. Dabere na Ozi kwa ụbọchị , mgbe ọ na-achọ ịkpọku eze nwanyị, ọ bịara dị ka aha ya bụ Gary. Site na ntaneti, Otu ọbịa nke gara inye aka jụrụ onye Gary bụ, na-eche na ọ ga-abụ onye otu ezinụlọ eze. ‘Abụ m Gary,’ ka Elizabeth zara. 'Ọ mụtabeghị ikwu Granny ma.'
Aha otutu: Uche, Wombat, Babe
Duke nke Cambridge nwere ezigbo aha otutu nwata aha Wombat, nke nne ya nyere ya Princess Diana. Na N'ajụjụ ọnụ 2007 na NBC , William (ma ọ bụ anyị ga-asị Ga) kwetara na aha ahụ nọgidere na-adịgide adịgide. Enweghị m ike iwepu ya ugbu a, o kwuru. Ọ malitere mgbe m dị afọ abụọ. Agwara m nke ọma n'ihi na enweghị m ike icheta n'oge ahụ, mana mgbe anyị na ndị mụrụ anyị gara Australia, na nwanyị ahụ, ị ​​maara, nke ahụ bụ anụmanụ mpaghara ahụ, yabụ akpọrọ m nke ahụ, ọ bụghị n'ihi na m lere anya dị ka nwanyị, ma ọ bụ ma eleghị anya m na-eme.
Thesebọchị ndị a, ọmarịcha onye ọ bụla na-akpọ ya Will, ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-enweghị atụ na onye ga-abụ eze nke England n'ọdịnihu
Ma e nwere Babe. Mgbe ị na-aga Chelsea Flower Show ọnụ na 2016, a nụrụ Kate Middleton na-agwa di ya, 'Babe, anyị nwere ndị ahụ. Anyị nwere ibu nke ndị ahụ, 'ebe anyị na-enyocha ọtụtụ ahịhịa.
Aha otutu: Lovehụnanya m, H, Spike
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ di na nwunye ọ bụla nwere aha enyi maka ibe ha, Meghan Markle na Prince Harry abụghịkwa otu.
bekee kacha mma ihunanya fim
Duke na Duchess nke Sussex apụọ maka a Hamilton ọrụ ebere na London's Victoria Palace aterlọ ihe nkiri na 2018 wee zuru show mgbe Markle na mberede kpughere aha ya na-enye obi ụtọ maka aha ugbu a-hubby. Mgbe di na nwunye gbakọtara ọnụ maka otu ndị otu na ndị otu na ndị ọrụ, duchess tụgharịrị na di ya wee jụọ, 'My hụrụ, ị nwere ike ịhụ?
Mana My Love abụghị naanị oge ịhụnanya na-amasị Harry. Mgbe ị na-agwa onye na-agba ajụjụ ọnụ Tom Bradby akwụkwọ maka akwụkwọ akụkọ ha, Harry & Meghan: Njem Africa , o kwuru, 'Ekwuru m ogologo oge H. Nke ahụ bụ ihe m na-akpọ ya.' Ndị enyi Harry, n'aka nke ọzọ, na-akpọ ya Spike, (nke o jikwa dị ka aha aha ntanetị n'ịntanetị ruo ọtụtụ afọ).
Aha otutu: Omenala
Prince Harry nwere aha otutu amara maka nwunye nwanne ya nke ọ na-eji ọtụtụ oge oyi (na mkpebi enweghị eze), dị ka ajụjụ ọnụ Kate mere na 2017 BBC Radio 1 .
Aha Cath dị mkpụmkpụ maka Catherine, aha Kate zuru-nke nweburu aha. N'aka nke ya, Duchess nke Cambridge amachaghị otu obere moniker nke Harry nyere ya si dịrị.
Aha otutu: Meg, Tungsten
H doro anya na ọ bụ aha njirimara n'ihi na ọ nwere ihe dị ụtọ (na nke zuru oke) maka nwunye ya Meghan Markle. Ọ hapụrụ ka ọ gbanye na nnabata Invictus Egwuregwu 2018 na Sydney, Australia. Aha ahụ? Meg. Naanị Meg.
Anyị anụkwala mkpọtụ na Prince Charles nwere moniker maka nwunye nwa ya - Tungsten. Dabere na Cosmo , Onye isi nke Wales nyere Markle aha mgbe o jitasịrị àgwà ya siri ike na metal nke nwere agbaze kachasị elu. Na-akpali.
Aha otutu: Fred & Gladys
A na-eche Prince Charles na nwunye ya Duchess nke Cornwall ka ha kpọọ ibe ha Fred na Gladys. Agbanyeghị, nkọwa dị na backstory maka aha ndị a amachaghị.
7. Adaeze Beatrice
Aha otutu: Beabea
N'ịsọpụrụ ụbọchị ọmụmụ nke nwanne ya nwanyị 31st, Princess Eugenie kesara ihe ngosi mmịfe nke Instagram na foto site n'oge gara aga na nke ugbu a ọnụ. O kpughekwara aha ya maka Beatrice. Have na-elekọta ya kemgbe amụrụ m ma na-aga n'ihu bụrụ onye kachasị ebube, enyi na nnukwu nwanne nwanyị sister Happy Birthday to you Beabea !! Xx, o dere.
8. Onye isi George
Aha otutu: P.G.
Imirikiti ndị na-ere ego na ndepụta a abụkarịla ihe dị n'ime gburugburu yana aha ndị mmadụ kenyere. Ya mere, ọ juru anyị anya nke ukwuu ịmata aha aha dị mfe nke ụmụ klas ya nyere Prince George na ụlọ akwụkwọ ya Thomas’s Battersea: P.G.
N'ajụjụ ọnụ Ihe efu efu , nne na nna wụfuru ihe ndị ahụ na ahụmịhe agụmakwụkwọ nke eze. George nwere obi ụtọ na ụlọ akwụkwọ, [aha] ya bụ P.G. Ọ na-ewu ewu nke ukwuu ma nwee ọtụtụ ndị enyi, ọ dịkwa obere mkpesa banyere onye ọ bụ.
Max Mumby / Indigo / Onye ntinye / Getty Images
Aha otutu: Nnukwu
Na-esote: Utu aha Kate Middleton maka Princess Charlotte dị afọ 5, aka 'Lottie.'
N'afọ gara aga, ka nọ na Northern Ireland, Duke na Duchess nke Cambridge kelere ndị mmadụ nke ọma n'ime igwe mmadụ gbakọtara izute ha. Otu n'ime ndị bịara ya, Laura-Ann, bụ onye Kate jụrụ maka nwa ya nwoke. 'Asịrị m na ọ dị afọ anọ ma ọ sịrị' oh, ọ bụ otu afọ ahụ dị ka Lottie'-ọ kpọrọ ya Lottie! ' ọ gwara Akwụkwọ akụkọ Daily Mail .
Aha otutu: Arch, Bubba, Obere ugu
Aha ndị a niile dị n'aka Archie site na nne na nna ya Meghan Markle na Prince na Harry. N'ọnwa Mee, di na nwunye ahụ kesara ihe osise maka Save the Children UK nke #SaveWithStories nke gosipụtara duchess na-agụ akwụkwọ ụmụaka Ọbọgwụ! Oke oyibo! Banyere Archie ka ọ na-amụmụ ọnụ ọchị ma nọdụ n'apata ya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara site na clip (na 51 sekọnd ka ọ bụrụ ihe ziri ezi), Markle na-ekwu, Ka anyị gbanwee peeji ahụ, ka anyị gosi mmadụ niile. Ka anyị gaa na peeji na-esote-lee Arch! Olee mara mma nke ahụ?
Mgbe Archie sonyeere na oge mbụ ya na oge mgbụsị akwụkwọ ikpeazụ ya na mgbụsị akwụkwọ ikpeazụ ya na Cape Town, a nụkwara Markle na-akpọ nwa ya nwoke 'Bubba.' N'ịghara ikwu banyere, Halloween gara aga, di na nwunye ahụ zoro aka na ya dị ka obere ugu anyị. Ee, anyị hụrụ ụdị aha nickname niile a n'anya.
esi belata agba agba abụọ
Njikọ : 14 nke Best Queen Elizabeth na-ekwu okwu na nsọpụrụ nke ụbọchị ọmụmụ 94th ya
Plọ ahịa Kate Middleton nke sitere n'ike mmụọ nsọ:
Blondo Tallis Slouch buutu mmiri
$ 202 Zụta ugbu a
$ 1,095 Zụta ugbu a
Erdem Ifuru Bipute Ogologo Uwe Midi Uwe Mwube
$ 1,495 Zụta ugbu a
J. Ndị ọrụ''Elsie''Suede mgbapụta
$ 75 Zụta ugbu a
Categories Ejiji News Ezi Ntụziaka Sexhụnanya Mmekọahụ
ihe kachasị mma maka uto ntutu
etemeete brushes na ojiji
ezi ndị enyi dị ka
elu nwere uwe ojii